Waa reebban tahay in lagu wado Gawaarida Gawaarida Dadweynaha ee Aan La Shaacin ee Kocaeli | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliWaa mamnuuc in la raaco gawaarida dadweynaha ee aan xirneyn ee Kocaeli
04 / 04 / 2020 41 Kocaeli, tareenka, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, taraamka
Waa reebban tahay in lagu wado korantada gaadiidka dadweynaha ee Kocaeli.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay talaabooyin cusub oo ka dhan ah cudurka dilaaga ah ee loo yaqaan coronavirus (Covid-19) oo shalay lagu soo saaray war-saxaafadeed. Xaaladda guud, muwaadiniinta ayaa laga mamnuucay inay raacaan gaadiidka dadweynaha ee aan xirneyn. Sharciga maanta jira, Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay u qaybisay muwaadiniin dhan 25 kun oo waji.
GO'AANKA CUSUB EE GAADIIDKA GUUD
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay shirka jaraa'id ee shalay in talaabooyin cusub laga qaaday cudurka faafa ee coronavirus. In kasta oo kuwa ka yar da'da 20 loo diido inay baxaan, codsi cusub ayaa loo bilaabay muwaadiniinta ay tahay inay baxaan. Waxaa lagu qasbay qof walba inuu xiro maaskaro dhammaan meelaha ay dadka sida suuqyada iyo suuqyadu isugu yimaadaan. Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sameysay isla go'aankii gaadiidka dadweynaha.
25 GUDAHA MASKAXDA
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay ku qasbeysay Muwaadiniinta inay adeegsadaan maaskaro iyagoo adeegsanaya gaadiidka dadweynaha. Mamnuucida kadib markay bilaabatay ilaa maantadan la joogo, Dowlada hoose ee Magaalada ayaa durbadiiba talaabo qaaday. Macnaha guud, Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ayaa 25 kun oo masool ah gaarsiisay Parking Parking si loogu adeegsado muwaadiniinta adeegsada gaadiidka dadweynaha.
LAGU SOO SAARAY Muwaadiniinta
Maqaarro la geeyay ilaalada amniga ee darawalada baarkinka gaadiidku ku istaago iyo taraamyada tareenka ayaa loo qaybiyay muwaadiniinta isticmaalaya gaadiidka dadweynaha. Maqaarka ayaa loo qaybiyay muwaaddiniinta doonaya inay raacaan gaadiidka dadweynaha ee aan lahayn maaskaro ayaa loo mahadceliyay. Mas'uuliyiinta baarkinka gaadiidku waxay uga digeen muwaadiniinta inaysan awoodi doonin inay raacaan gaadiidka dadweynaha bilaa masar.
Muwaadiniinta cadeynaya inay ka warqabaan lagama maarmaanka u ah xirashada maaskaro ee loogu talagalay gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ayaa dhaqan galaya maanta aroortii hore; Go'aanka la gaadhay waa mid sax ah. Waxaan taageersanahay go'aanka la qaatay annagoo tixgelin siinayna caafimaadkayaga iyo bulshada. Markii aan saaka fuulnay baska, ma aanan haysanin maaskaro. Waad ku mahadsan tihiin, wadayaasha ayaa mashiinka noo keenay annaga oo ku hadlaya magaca Dawladda Hoose ee Magaaladda. Intaa ka dib, waxay nooga digeen inaanan ku dul fuuli karin gaadiidka dadweynaha annaga oo aan masar dabooleynin. Waxaan ku aragnaa dalal shisheeye wararka. Way illoobeen waayeelka, ma u heli karaan maaskaro u ah muwaadiniintooda. Dalkeenna, Kocaeli Magaalo-weynaha Magaaladu waxay labadaba soo saaraan waji-bixinno waxayna u qaybiyaan maaskaro caafimaadkeena lacag la’aan. Illaahay ha u oggolaan gobolkayaga. Maxaan kaloo weyddiin karnaa?
Rakaab aan aqoon lahayn laguma heli doono Gaadiidka Dadweynaha ee Eskişehir
Akcaray ayaa istaagay
26 Laga bilaabo Maarso ilaa Isbuuc, akhri buug jidka Tareenka ee Gaziantep Free.
Aad ayay qaali u tahay inaad raacdo taraamka Samson